Ingabe Ukugqoka Kuwusizo Emkhankasweni Wakho WEMSEO? - Uchwepheshe We-Semalt, uNatalika Khachaturyan
Ukuphula izimo ze-Webmaster ye-Google nemihlahlandlela kungenza isayithi lakho libe yisilinganiso esiphansi noma sifinyelele kuhlu lwabantu abaku-Google. Inombolo eningi yabaphathi bewebhu baqaphela ukusebenzisa amasu omnyama we-SEO ukukala phezulu injini yokusesha ngemuva nje kokuqala ukuthuthukiswa kwezindawo. Muva nje, i-cloaking bekuyisihloko sokuxoxisana embonini yokukhangisa digital .
Isikhali Sokuqukethwe Semalt , uNatalika Khachaturyan, uchaza ukuthi ukugqoka kungenye yezindlela ezihle kakhulu ezisebenzisayo ezisebenzisayo ezimakethe ezibhekiswe kuzo ngesikhathi sangempela. Uma kuziwa ukugqoka, ama-webmasters ama-search amaqhinga ngokuwaveza okuqukethwe okuhlukile ematheksthi aboniswe kuzivakashi ezingenzeka. Ngamazwi alula, i-cloaking ihlela amaseva wakho wewebhusayithi ukubuyisela inguqulo ehlukile yezinto kubasebenzisi uma kuqhathaniswa nokuqukethwe okuhanjiswe kuma-injini yokusesha.
Indlela i-Google ephendula ngayo ukuvala i-cloaking
Eyaziwa nangokuthi ugaxekile we-injini yokusesha, ukugqoka i-scheme yesikhashana yokucinga injini yokusesha engakwazi ukuchitha ngokuphelele umkhankaso wakho we-inthanethi wesikhathi esizayo. Izinjini zokusesha azithandi ukukhohliswa. Ukunikeza izigubhu kanye ne-bots nemibhalo ye-HTML nabasebenzisi ababuyisayo ngemiphumela yezithombe ukuphulwa okungaqeda ukongamela umsebenzi wakho njengomthengisi wedijithali.
Abaphathi be-Web basebenzisa i-cloaking kumasayithi abo ngenhloso yodwa yokuthuthukisa izikhundla ze-algorithms ngokukhohlisa izigubhu kanye ne-bots. I-Google igweba abakwa-webmasters ukusebenzisa i-web kanye nekhasi ngokugqoka ngokumaka igama labo elingukhiye njengento engafanele. Ukuqhutshwa okuqhubekayo kwamasu omnyama we-SEO e-website yakho ye-e-commerce kungaholela ekuthandeni kwamagama angabandlululo.
Ukusebenzisa ifayili ephathekayo yokwenza i-cloaking kusayithi lakho
Kuye kwaphakanyiswa imibuzo ephathelene nokugubha. Ukuze usebenze kokubili i-web cloaking kanye nekhasi elivala ngewebhusayithi yakho, kufanele uqaphe futhi uhlakaniphe ngokwanele. Umqondo wonke wokugqoka uncike ngokuphelele kumsebenzisi-agents kanye namakheli e-IP. Ukuze uphumelele kule nqubo ye-SEO yomnyama omnyama, abakwa-webmasters baqoqa abashayeli be-search engine kanye nohlu lwamakheli we-IP abasiza ukuba bahambise okuqukethwe.
Ngokuguqula ifayela lokumisa le-apktha usebenzisa i-module ye-Apache yesiphakeli, ama-webmasters asebenza ngokuletha okuqukethwe ngokuthola lapho ikheli le-IP livela khona. Uma isiphakeli se-mod-rewrite sichaza ikheli le-IP lingabakwa-crawlers web, iskripthi esakhiwe inikeza inguqulo ehlukile yalokho okuqukethwe kwasekuqaleni.
Ama-webmasters akhulisa izihloko, izincazelo, namathegi we-Meta ukuze afake izinga eliphezulu kulezi zindlela zokuhlela. Nazi izinqubo ze-SEO ezilungiselelwe ngabakwa-webmasters ukukhohlisa izinjini zokusesha.
Ukuvala nge-imeyili kungenye yamasu we-SEO omnyama-angayithola ukuthi i-website yakho ibhalisiwe. I-mail cloaking isebenza ngokubethela ikheli kanye negama lomthumeli ukufihla ubunikazi babo.
Izingosi ezicebile isithombe
Abakwa-Crawlers abasebenzisi abasebenzisi izithombe. Okuqukethwe okucebile kwesithombe kunamakamelo amaningi kunempahla. Abaphathi bewebhu bawasebenzisa ngokunenzuzo amamodeli ukuthola amazinga aphezulu mayelana namagama angukhiye afanelekayo.
Ukubhala kabusha ama-URL
Eyaziwa nangokuthi i-URL ye-cloaking, i-URL Yokubhalwa kabusha kuyindlela entsha ye-SEO ye-hat eyasebenza ekushintsheni ama-URL bese ishiya okuqukethwe kuhambelana.
Ukugqoka kungenye yezinkomba ezimnyama ze-SEO ezingafanele ucabange ukuzenza kuwebhusayithi yakho. Ukugqoka kuxhomeke ekukhohliseni izinjini zokusesha nokukhohlisa izinsipho kanye ne-bots. Amanye amawebhusayithi abanjwe ohlwini lwama-akhawunti ngenxa yokuthuthukisa amawebhusayithi awo ngamasu we-SEO omnyama njenge-spinning and cloaking. Lungiselela iwebhusayithi yakho ngamasu omhlophe we-SEO ukuze uthole ukubekwa okuphezulu kwegama lakho elingukhiye.